ट्राफिकले अफिसमै ल्याइदिए लाइसेन्स « paniphoto
« यस्तो देखियो सुपर मून ! पहिचान खोज्नेहरुलाई प्रश्न »	ट्राफिकले अफिसमै ल्याइदिए लाइसेन्स
By -paniphoto- on Sunday May 06, 2012	बैशाख २० मा पानीफोटोमा खगेन्द्र लामिछानेको लाइसेन्स ट्राफिकले लगेको बारेमा ब्लग लेखिएको थियो । तपाईले पढ्नु भयो कि भएन, नपढ्नेहरुलाई सानो रिभ्यु गराइहालुँ । राती मापसे चेकजाँच गर्दा मापसेमा नपरेका लामिछानेको मोटरसाइकलको लाइसेन्स अर्कै मानिससँग साटिएको थियो ट्राफिकको हातबाट । लामिछानेलाई उनको लाइसेन्स सोही समय फिर्ता दिन नसकेपछि ट्राफिकले उनलाई ट्राफिक अफिसमै आएर अर्को दिन लाइसेन्स लग्न भनेकी थिइन् । तर खगेन्द्रले आफुले नभइ ट्राफिकले गल्ति गरेको कारण ट्राफिकले नै फिर्ता दिन अफिस ल्याइदिनु पर्ने अड्डि गरेको थिए । त्यति बेला त्यसरी ल्याउँन सक्दिन भनेको ट्राफिकले लाइसेन्स उनकै अफिसमा ल्याइदिएको छ । थप उनकै भाषामा
सञ्चारमाध्यमा आवाज उठाएपछि यसले सकारात्मक काम गर्र्यो । त्यतिबेला देखि नै मैले मेरो गल्ति नभएको कारण मेरो लाइसेन्स मेरो अफिसमै ट्राफिकले ल्याइदिनु पर्ने कुरा मैले राखेको थिएँ । वास्तवमा यो जित र हारको मात्र कुरा थिएन । यो जसले गल्ति गर्छ त्यसले नै सुधार्नु पर्छ भन्ने कुरा पनि थियो । सोही अनुसार बैशाख २२ गते बिहानै ट्राफिकले मेरो अफिसमा लाइसेन्स ल्याइदिनु भयो । वास्तवमा कुरा सामान्य भएपनि नियम कानुन पालना गरेमा डराउँनु पर्दैन र न्याय पाइन्छ भन्ने अनुभव गर्न पाइयो । आफ्नो गल्ति सच्याउँने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग, थापाथलीलाई धेरै धेरै धन्यवाद ।
घटना के भएको हो भन्ने जान्न पुरानो ब्लग पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् समग्र घटनाबारेमा तपाईको भनाइ के छ ? अल्छि नगरी तल कमेन्टमा लेख्नुहोस् है ।
« यस्तो देखियो सुपर मून ! पहिचान खोज्नेहरुलाई प्रश्न »	5 comments to ट्राफिकले अफिसमै ल्याइदिए लाइसेन्स
· जवाफ दिनुहोस्	यो चै राम्रो भयो/ जसले गल्ति गरेको हो उसले नै त्यसको सुधार गर्नु पर्छ/ ट्राफिकले गल्ति सुधारेर राम्रो गर्यो/ अति हिम्मत गरेकोमा खगेन्द्र लामिछानेलाई धन्यबाद/
· जवाफ दिनुहोस्	हे भगवान अब ट्राफिकले लाईसेन्स पकड्यो भने पनि अत्रो नाटक गर्नु पर्ने ? यो त अति नै भयो. सबैको घरमा लाईसेन्स लग्न भ्यौछ ट्राफिकले ? बेबहरिक बनौ न साथी
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	Mohit
· जवाफ दिनुहोस्	अझै रहेछ कतैकतै कानुनी राज नेपालमा कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	Bharat Bista
· जवाफ दिनुहोस्	सानालाई त हो नि यस्तो ठुला भष्ट्रचारी त discount मा छुट्छन, माला लाउँदै जेलबाट युद्ध जितेजस्तो गरि फर्कन्छन् । कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	ram karki
· जवाफ दिनुहोस्	कानुनी राज्यको आभास भो/ लाइसेन्स बनाउदा,कर्मचारीले जनतासाग खको घुस पनि तेसरी फिर्ता गर्ने गरेको सुन्न पैयोस/